Le Bhanti yePunk Punk ilunge ngakumbi kunayo nayiphi na into oyibonileyo kwiiGrammys | - Umculo
Eyona Umculo Le bhanti yePunk Punk ilunge ngakumbi kunayo nayiphi na into oyibonileyo kwiiGrammys
Le bhanti yePunk Punk ilunge ngakumbi kunayo nayiphi na into oyibonileyo kwiiGrammys
UStefan, u-Olga, kunye noCornelia, aka Abantwana baMedieval Band.Ifoto: Bantwana bamaXesha aPhakathi.
Ukuhluthwa amandla ayo okwenza izigidi ezizezinye zeelebheli ezinkulu ezinobumbano kwaye kungasekho doodle-de-jour yeeGuitar Centre douchebags, kuyabonakala ukuba ixesha le-punk rock njengesixhobo esifanelekileyo sorhwebo sele lidlulileyo.
Yinto entle leyo. Ukuba akukho mntu ucinga ukuba i-punk rock ingabanceda ukuba babekwe okanye babe zizityebi, mhlawumbi inokuthi ekugqibeleni ibe yinto eyazenza ngathi: indlela elula nenyanzelisayo yokubalisa ibali, ukubandakanya ubutshantliziyo, ukuthetha inyani kumandla, kunye nokunika ilizwi engenamandla.
Ngamanye amagama, i-punk rock inokuba ngumculo wesintu.
Ndiqale ukucinga ngayo yonke le mibulelo kwiqela elingenakulindeleka: iqela elinomtsalane lamashumi amabini abiziweyo Iqela laBantwana eliPhakathi (hayi typo-hayi The, kwaye ayingoBantwana). Nangona i-CMB mhlawumbi ingazicingi njengebhendi ye-punk, ingumzekelo omangalisayo wepunk: Basebenzisa iifom zomculo ezilula kakhulu, ezidlalwa ngokuqanjwa, isilwanyana, ukuchaneka kunye nobuchule bokwenza umculo onyanzelisayo nonamandla.
Ngo-Epreli 2012 ezinye iividiyo zaqala ukujikeleza kwimithombo yeendaba ezinabantwana-abaneminyaka eyi-10, 9 kunye no-6-bedlala amaqweqwe eRammstein. Ukuba ubukele ezi kliphu ngokungangqalanga (kwaye ulandele izikhokelo kwezinye zeevidiyo zaBantwana bamaXesha aPhakathi), waqonda ukuba ayingobantwana abahle nje kuphela abacula iingoma zerock; endaweni yoko, ezi ziqwenga zidlalwe ngokuchanekileyo, injongo kunye nothando. Akunakuba ngumntwana omncinci, ngaphandle kokuba ucinga Ndilinde Indoda, Ex Ingonyama Tamer, okanye Ubuphi yobuntwana. Aba bantwana bakhubekile kwimixube efanayo engxolayo, eqinileyo, enobugcisa kunye ne-ultra-elula eyayikhe yahlolwa ziiSonics, iiVelvets, iiCramps, iWire noYesu noMary Chain.
Iiklip zokuqhubela phambili (ngexesha abantwana abalupheleyo ngobudala) zibonisa uhlobo olufanayo lokuqina kunye nokufezekisa okugqibeleleyo, okukhokelela kwisandi, isandi kunye nesandi esichanekileyo esikhumbuza iVelvets inyathelo elinemigangatho emibini kunye nedrone, Arcade Fire's arty tumble, Neu Ubunyulu obuncinci be-minimalist, kunye ne-Pere Ubu's-highway churn. Kananjalo kubalulekile ukuba uqaphele linani leziqwengana ezingaqhelekanga ezibonisa abantwana beMedieval Band kwisinxibo, bedlala izixhobo ze-acoustic kwiiRenaissance Festivals; Kwezi, iqela lisebenzisa olu hlobo lunye lwendlela evuyayo, eyonzakeleyo yoDade uRay / Dot Dash kumculo we-Renaissance we-Renaissance, oza nento efana neeVelvets ezigubungela iingoma zeSid Hemphill, kwaye ingaba inkulu kangakanani loo nto?
I-Children Medieval Band ime njengobungqina obuqinisekileyo bokuba ubuchule obuncinci bunokufakwa kumculo omangalisayo.
Ezinye zeeklip zokuphila ezintsha zikwabonisa Ukuqanjwa kwasekuqaleni , ezidibanisa ukuchaneka kwe-bartop-thumping kunye namandla ezigqubuthelo zabo kunye ne-Swans-esque lurch kunye nokuba sesichengeni kwasekuqaleni kwe-REM. Phantse yonke iklip yeQela laBantwana eliPhakathi luvuyo kunye nesityhilelo; Nantsi ithemba lokuba isiginci asifundisi ukukrazula, kwaye sihlala sinyanisekile kule garaji ye-Wire-esque yobugcisa bobugcisa. Hayi, ukuba bayayifunda le nto, ndincoma ukuba bamamele (uninzi) Entsha! , Iimekoni , Ucingo kwaye IDusseldorf , kwaye ufunde ezi nkosi zobugcisa bokudala, ukucacisa ngokunzulu kunye nokulula okuqhelekileyo.
Kwelinye icala, i-Children Medieval Band ime njengobungqina obungqongqo bokuba ubuchule obuncinci bunokufakwa kumculo omangalisayo. Kumnandi ukukhunjuzwa ngaloo nto. Kwelinye icala, amandla, ubulula kunye nokukhawuleza kwe-CMB yalatha kwinto enkulu kakhulu.
Ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane eyadlulayo, umculo wesintu wakhuthaza nabani na, nokuba ubungcali bunjani, ukuba athathe isiginkci, adlale umculo, enze ingxelo malunga nehlabathi, malunga nentombazana, malunga nomsebenzi, malunga nezopolitiko, malunga nomsitho weendaba. Kuzo zonke izikhokelo zemfundo, ezobuzwe kunye nezembali onokuzifaka eluntwini, okokuqala nokuphambili komculo womculo wasemva kweminyaka yoo-1950 nakwiminyaka yoo-1960s wabonelela iimvumi ngomgaqo othe ngqo othe ngqo phakathi kwengcinga nentetho. Uthathe ikatala wathetha into.
I-Punk rock inokuba yile, nayo, nangona kunqabile ukuba njalo. Kakhulu, kwasekuqaleni kokumitha kwayo-kwasekuqaleni eneneni ukuba yayakhiwe kwi-DNA yayo esibelekweni-ilitye le-punk lalisele linyanisile ngezimvo zesiko malunga nokuzinza kunye nefashoni. Kuyinyani ukuba umculo womculo we-punk wawuyindlela ephawuleka ngokumangalisayo nangempumelelo kwiifripperies, indulgences and excesses ezazikho emculweni ekuqaleni naphakathi kweminyaka yoo-1970; kodwa abo babizwa ngokuba ngabavukeli babeneminqweno yobuqu kunye neyezemali njengabantu ababevukela.
Aba asingobantwana nje ‘abahle’ abathanda umntwana iingoma zerock; ezi ziqwenga zidlalwa ngokuchanekileyo, injongo kunye nothando. Akunakuba ngaphantsi kobuntwana.
I-Punk rock yayiyeyona nto yayilungiso lweemarike, kwaye kuncinci kunothando, kwakunjengokuba xa umfana osisityebi ophakathi elahla umfazi wakhe omdala, onobuqili, opeyintwe ngaphezulu komntu othile, iimbaleki kunye nokusebenza kakuhle. Ngokwenene. Umzi mveliso wecandelo lomculo kunye neemeko zihlala zingaguquki, ekuphela kwento eyahlukileyo yayiyimveliso.
Kwiminyaka yakutshanje, kuninzi okutshintshileyo. Namhlanje, mancinci kakhulu amathuba okuba i-punk-kuyo nayiphi na into kodwa ibethwe kakhulu, ifomathi ye-hyperthyroid'd Foo-ish-inokubanakho ukwenza Amandla aKhe abe yimali; Okwesibini, sikude lee kwimikhosi yeqonga neyokugqibela ekhokelele kumjikelo wokuqala we-punk (ipeyintiwe i-Ziggy-isms, i-brawny Iggy-isms, kunye neebhendi zokuqala ze-gen ikakhulu ezichaphazelwe ziiDolls ezinesitayile kunye ne-foppish, i-Sensational Alex Harvey Band, kunye neMott the Hoople) ela punk rock ngoku linokuvela kuMama uGlitter kwaye liqhubele phambili ngokusekwe kwimbono yokuba umntu owaziyo amaqhosha amathathu unento afuna ukuyithetha.
(Ngendlela, ndizithanda kakhulu zonke izinto endizichazileyo kumhlathi wokugqibela; inye into yokuba inkwenkwezi ye-rock eposayo kuzo zonke ezi zinto zithetha ukuba izenzo zokuqala zepunk eziphakanyiswe kwisithunzi sabo zazisele zifile ngokwentanda-bulumko emanzini ngaphambili Bade badlala nenqaku labo lokuqala.)
Ukuya kwinqanaba elikhulu (nangona kunjalo, aligqibanga) isidanga, intsomi yesiphelo sama-50s / early '60s was a purer form of musical expression. I-Circa 1961, kakhulu, zimbalwa kakhulu iimvumi ezazinokucinga ukuba ukucula malunga neemanyano kunye nokudityaniswa kwakuza kuzenza iinkwenkwezi (apha siphawula ukuba icwecwe lokuqala likaBob Dylan alitshatanga, kwaye lithengise kuphela iikopi ezingama-2 500 ngexesha lokukhululwa). Kodwa aba bantu badlale amaqhosha amathathu, banento yokuyithetha, kwaye bahlala bebeka umngcipheko kwiintamo zabo ukuyithetha (ngokuchasene nelitye le-punk, elihlala lisenza impazamo yokucinga ukuba ukulwela ilungelo lokudaya iinwele zakho ezipinki kwakufana nokulwela into ebaluleke ngokwenene).
Namhlanje, ngoku kungasekho ndlela enokubakho kwimpumelelo yorhwebo, kunokwenzeka ukuba ipunk ekugqibeleni ibe yile nto ibizenza ngathi yiyo. Ibhendi inokuba yinto elula, eqinileyo kunye nokuqhuma kwezobugcisa (njengabantwana be-Medieval Band), kodwa banokusebenzisa ukuzithemba kwabo kunye nokuphatheka ukuthetha into enamandla, enentsingiselo, enengxabano, eyathuthuzelayo, ekhuthazayo, evuselelayo, enovelwano kunye nokufundisa. Kwaye ngokuphatheka, ndithetha ukuba enkosi kwi-Intanethi nakumajelo eendaba ezentlalo, umhlaba usondele kwaye ufikeleleka ngokukhawuleza kwiqela le-punk njengoko iWashington Square Park yayikwimvumi eyaziwayo kwiminyaka engama-55 eyadlulayo.
Khawufane ucinge iinguqulelo eziliwaka zeCrass, zivakala zilungile kuphela, kwaye kwiikhompyuter zehlabathi, ngemizuzu.
I-Punk rock ihlala iyeyona ndlela isebenzayo, enomtsalane, kunye neyobuchule yokufumana umyalezo kuwo. Umntu ofunda oku unento afuna ukuyithetha malunga nokukhetha, okanye imipu, okanye ubuhlanga, okanye ukugcwala, okanye okusingqongileyo, okanye ezinye izinto ezingama-8,800; Lo mntu sisigubhu esinye, okanye isigingci esinye, okanye ibassist enye, kunye neseshoni enye yegaraji kude nokwenza le ngxelo ngendlela elula, evakalayo nesebenzayo.
Lixesha lokuba ipunk ibe yinto entsha. Kwaye akukho mntu ujonge ukusayina iesile lakho. Yitsho nje kwaye uyidlale ngendlela odinga ngayo. Kanye njengeBhendi yaBantwana abaDala.
Ezona zixhobo ziPhambili zoLungiso loMsebenzi
Imiyalelo kaGqirha: Amadoda kufuneka atye oku kutya kuku-3 seMpilo elungileyo
IZiko elincinci laseLincoln 'uDon Giovanni' yile nto kanye uMozart ebeya kuyifuna
Nazi Zonke iiMovie zeMfazwe ezizayo kunye neMiboniso kwiMisebenzi
Ngaba 'iiHobbs kunye neShaw' ziya kuyilahla iOfisi yeBhokisi yeHlobo?
I-Disney iya kuba neFox ngokusemthethweni kwiVeki ezayo-Nantsi into onokuyilindela kwi-Merger ye- $ 71.3B
Umntu othile ulawula iphepha leWikipedia ye-Insider Trading Crook Dennis Levine
I-Google's 'Lightsaber Escape' ijongeka ngathi isebenza njenge 'Produck Hunt'
I-Trump's Transgender Military Ban Harkens Buyela ku 'Musa Ukubuza, Musa Ukuxelela'
Abantu baqikelela njani iMozulu ngaphambi kweTekhnoloji yanamhlanje
uTom encinci uthetha ngenkosana
israel imvumi yaseHawaii kwindawo ethile ngaphaya komnyama
umthetho kunye nomyalelo: icandelo lamaxhoba akhethekileyo anikezela ngoah
isoka lithetha nam
ezona zenzo zibalaseleyo zexesha lonke